Dadka Ku Dhintay Rabshadaha Itoobiya Oo Gaadhay 166 qof | Gaaroodi News
Dadka Ku Dhintay Rabshadaha Itoobiya Oo Gaadhay 166 qof
July 6, 2020 | Published by: Tifaaftiraha
Komishneerka booliska magaalada Addis Ababa Getu Argaw oo dhawaan warbaahinta dalka Itoobiya la hadlay wuxuu sheegay dadka dhintay iney naftooda ku waayeen qarax bambooyin, rasaas iyo dhagaxaan ay mudaharaadayaashu isladhaceen
Booliska dalka Itoobiya waxay sheegeen rabshadihi dalkaasi ka billaawday iney gabi ahaanba ay hadda istaageen.
Hanjabaadda Dr Abiy Axmed
Ra’isal wasaaraha Itoobiya Dr Abiy Axmed oo qowmiyadda Oromada ka soo jeeda oo talada dalkaasi qabtay bishii April 2018-kii wuxuu digniin u diray kooxda ka dambeysy dilka fannaanka ee doonaya iney carqaladeeyaan isbeddelka uu doonayo inuu dalka Itoobiya ka hanaqaado.
Ra’isal wasaaraha Itoobiya Dr Axmed ayaa sheegay rabshadihi maalmihi ugu dambeeyey ka socda dalka Itoobiya ee ay soo maleegeen waxa uu ku sheegay cadowga dalka Itoobiya iney laamaha ammaanka Federaalka iyo Deegaanka oromada aysoo afjareen.
“Aragtiyada naceybka xambaarsan ee ku saleysan qowmiyad ama siyaasad dalka Itoobiya wixi hadda ka dambeeya boos ugama bannaana, xoogagga doonayey iney dalka Itoobiya dhiig ku daadiyaanna waxaan u sheegayaa iney riyadoodaasi marnaba rumoobeynin” ayuu yiri
Oromadu maxay u mudaharaadeysaa?
Qowmiyadda Oromada waxay wakhti dheer ka cabanayeen in la gacan bidixeyo. 2016-ki waxay qowmiyadda billowday mudaharaadyo ballaadhan oo ay dowladda ku cadaadinayaan in siyaasadda dalka isbeddel lagu sameeyo.
Xisbiga EPRDF ee talada hayeyna mudaharaadayada dalkaasi ka socday markay istaagi waayeen si ay codsiga shacabka uga jawaabaan Ra’isal Wasaare Hailemaaryaam Desaalegn waxay ku beddeleen Dr Abiy Axmed.
Wuxuuna Abiy Axmed uu la yimid isbeddel siyaasadeed oo la taaban karo isaga oo la soo baxay siyaasad furfuran.
Hase yeeshee, waxaa dalka Itoobiya ka qarxay dagaalla beeleedyo qowmiyadaha dalkaasi dhexmaraya oo xaaladda dalka Itoobiya sii murjiyey.
Mr Abiy wuxuu ku guuleystay abaalmarinta nabadda ee Noble Prize 2019-kii, iyada oo abaalmarintaasi uu ku muteystay sida uu ugu guuleystay colaaddi muddada dheer taagneyd ee u dhaxeysay Ethiopia iyo Eritrea sida uu u soo afjaray.